Sọnde, Disemba 26, 2021 3:56 nke ụtụtụ
fedora 35 epel jụrụ
ndabere mperi dara ada
Sọnde, Disemba 26, 2021 6:32 nke ụtụtụ
Ndewo jacques, daalụ maka ozi ahụ.
Ejighị m n'aka otu i siri nweta nke a, epel-next-9.2 ka ewepụtara maka CentOS 9 Stream ekwesighi ka achọrọ maka Fedora ebe CentOS Stream ka bụ ụdị Fedora nke ala.
Ejiri m Fedora 35 ọhụrụ, arụnyere ma n'efu na nke na-abụghị nke efu, ma ahụghị otu njehie ahụ mgbe ị na-etinye ya.
Ị tinyela ụdịrị ebe nchekwa EPEL ma ọ bụ RPM Fusion nke gara aga, Fedora 35 dị ugbu a ka ọ nwere nnukwu mgbanwe ọ bụla?
Ọ kwesịrị ịdị mma n'ụzọ kwụ ọtọ, Achọrọ m ozi ndị ọzọ ka ọ bụ njehie dị egwu ihe ọzọ ga-agarịrị naanị ịchọrọ ịchọpụta ihe ọ bụ.